Yuusuf Dabageed oo socod ku maray wadooyinka Beledweyne (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Yuusuf Dabageed oo socod ku maray wadooyinka Beledweyne (SAWIRRO)
Yuusuf Dabageed oo socod ku maray wadooyinka Beledweyne (SAWIRRO)
Kusimaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabelle, Yuusuf Ahmed Hagar (Yuusuf Dabageed) ayaa maanta socod ku soo maray wadooyinka Magaalada Beledweyne.
Madaxweyne Kuxigeenka oo ay wehliyaan qaar ka mid ah Golaha Wasiirada Hirshabelle, Xildhibaano iyo Saraakiil ciidan ayuu kormeerkoodu la xiriiray u kuurgelidda xaaladda amni ee magaalada.
Wasiir Amniga Hirshabelle, Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo ka mid ahaa xubnihii kormeerka ku wehlinayay Madaxweyne Kuxigeenka ayaa sheegay in kormeerkoodu uu la xiriiray u kuurgelidda amniga magaalada.
Wasiirka ayaa tilmaamay in Magaalada Beledweyne uu ku soo fool leeyahay Doorashada Xildhibaanada Hirshabelle ku metelaya Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, isagoona hay’adaha amniga ku ammaanay in ay wax badan ka qabteen amniga magaaladaasi.
Yuusuf Dabageed oo geba-gabadii kormeerkaasi la hadlay Warbaahinta ayaa dadka reer Beledweyne ugu baaqay inay gacan ka gaystaan dadaalada uu maamulku ku xaqiijinayo amniga magaalada, isla-markaana ay iska dhex qabtaan kuwa doonaya inay amnigooda carqaladeeyaan.
Hadalka Yuusuf Dabageed ayaa imaanaya, maalin ka dib dagaalka aroornimadii hore ee Axaddii ka dhacay Xarunta Gobolka Hiiraan ee Beledweyne.
Hirshabelle ayaa caqabad dhanka amniga ah kala kulmeysa General Abuukar Xaaji Warsame (Xuud), oo horey uga tirsanaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka.
Jananka ayaa horyimid hannaankii loo maray doorashadii 11-kii bishii November ee sanadkii hore ka dhacday Magaalada Jowhar, laguna soo doortay Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Previous articleGeneral Odawaa oo ka hadlay hawlgalka lagu dilay Maxamed Cabdi Suubiye (Toosow)
Next articleGuddoonka Guddiyada Doorashooyinka K/galbeed & Galmudug oo la doortay